ဖက်ဒရယ်ဂျာနယ် အတွဲ-၃၊ အမှတ်-၁၀ ထွက်ရှိ | MoeMaKa Burmese News & Media
သြဂတ်စ် ၂၅၊ ၂၀၁၅
မိုးမခ ပရိတ်သတ်များကို ဖက်ဒရယ်ဂျာနယ် (Quarterly Journal of Federalism Vol-3, Issue-10, August, 2015) ပြီးခဲ့တဲ့ အပတ် သြဂုတ် ၁၄ ရက်နေ့က ထွက်ရှိကြောင်း အသိပေးချင်ပါတယ်။
ဂျာနယ်မှာ ‘ငြိမ်းချမ်းရေးနဲ့အာဏာ’ အယ်ဒီတာအာဘော် နဲ့ အတူ ပြည်တွင်းငြိမ်းချမ်းရေး၊ ဖက်ဒရယ် အရေး၊ တိုင်းရင်းသား အရေး ဆက်စပ် စာရေးဆရာစုံရဲ့ အာဘော်အမြင် ဆွေးနွေးချက်တွေပါရှိပါတယ်။ ငြိမ်းချမ်းရေးဖြစ်စဉ်မှာ ထဲထဲဝင်ဝင် ပတ်သက်နေကြတဲ့ အစိုးရနဲ့ လက်နက်ကိုင်လူမျိုးစုတော်လှန်ရေးတပ်တွေက ပုဂ္ဂိုလ်များ၊ စာပေ စာနယ်ဇင်းတွေမှာ စာရေး နေကြတဲ့ စာရေးဆရာများရဲ့ ဘက်ပေါင်းစုံကအမြင်တွေကို ဖတ်ရမှာပါ။ မိုးမခ မိတ်ဆွေကလောင်များဖြစ်တဲ့ မောင်မောင်စိုး၊ ဒေါက်တာလွဏ်းဆွေ၊ ငြိမ်းချမ်းအေးတို့ရဲ့ဆောင်းပါးများလည်း ပါရှိပါတယ်။
စိတ်ဝင်စားသူ မိုးမခစာဖတ်ပရိတ်သတ်များအနေနဲ့ ပြည်တွင်း စာအုပ်ဆိုင်ကြီးမှာ ဝယ်ယူဖတ်ရှု စဉ်းစား ဝေဖန်ဆွေးနွေး နိုင်ကြောင်း လက်တို့လိုက်ကြောင်းပါ။
One Response to ဖက်ဒရယ်ဂျာနယ် အတွဲ-၃၊ အမှတ်-၁၀ ထွက်ရှိ
yekyawthu on August 25, 2015 at 2:09 pm
let us imitate the Federal Systems of Germany, USA and Switzerland in which everyone has dignity and respect. Even if the economy of each Federal State is free and liberal, it helps the economy of the Country indirectly. For example if the Kachins have free economy, they can export jade and gold freely but they will buy rice, fish, sea food, construction materials form other federal states.Let the Arakanese flourish their state with tourism using their beautiful beaches ) not controlled by the Chronies and generals form Yangon) and they will but other needs form the rest of Myanmar.Let the Chins export apples and oranges to neighboring country, they will buy rice, fish, cement bricks form other federal states.The same will be for the Kayin state, Shan Sate, Kayah Sattes So the Free economy helps one another . Our people in the Uniforms do not care nor understand anything except for their wives and children ( they do not even consider the needs of their own soldiers)
In the US, the Defense and Foreign policy unites the whole nation but in each State the police have different uniforms and different traffic rules) especially the limit of speedt etc)
Long live FEDERAL UNION MYANMAR